Faaqidaadda Ciyaaraha: Heat iyo Spurs oo Kala Hari la'
Toni Parker oo u ciyaara San Antonio Spurs oo dhex jibaaxaya ciyaartoyda Miami Heat oo difaacaya kolaygooda.
Barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha waxaad gabi ahaanba ku maqli doontaan falanqeyn ku saabsan ciyaaraha kama danbeysta ah ee NBA, kuwaasi oo ay ku loolamayaan labada kooxood ee Miami Heat iyo San Antonio Spurs.
Labada kooxood ayaa ilaa iyo hadda ciyaaray 5 kulan waxaana 3-2 ku horeysa kooxda San Antonio oo xalay 114-104 kaga badisay Miami Heat. Waxaa harsan laba kulan oo ka dhici doona guriga Miami, kan hore hadii ay badiso Spurs waxa ay ku guuleystan doontaa horyaalka NBA ee sanadkan, hadii ay Miami badisose waxaa la isla aadi doonaa kulanka 7aad oo ciddii badisaahi ay koobka ku guuleysan doonto.
San Antonio Spurs hadii ay koobkan hanato waxa uu noqonayaa keedii 5aad ee ay ku guuleysato taariikh ahaan halka Miami Heat uu noqonayo keedii seddexaad.
Xiddiga NBA ee dheela Miami LeBron James ayaa hadii laga badiyo waxa ay noqoneysaa guuladaradii 3aad ee looga adkaado koobka NBA oo horey ay uga soo badiyeen Dallas iyo San Antonio-yada ay hadda loolamayaan.
Barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha oo dhan halkan hoose ka dhageyso.